Pro प्रमाणित टाइम्स तपाईंको स्वचालित ईमेलहरू पठाउनुहोस् Martech Zone
हामी स्वचालित ईमेलहरूको विशाल प्रशंसक हौं। कम्पनीहरूसँग प्राय: प्रत्येक संभावना वा ग्राहकलाई नियमित आधारमा छुने स्रोतहरू छैनन्, त्यसैले स्वचालित ईमेलको नाटकीय प्रभाव हुन सक्छ तपाइँको नेतृत्व र ग्राहकहरु दुबै संचार गर्न र हुर्काउने क्षमतामा। एम्माले यस इन्फोग्राफिकलाई शीर्षमा सँगै पु in्याउनमा उत्कृष्ट काम गरेको छ Most सबैभन्दा प्रभावकारी स्वचालित ईमेलहरू पठाउन.
यदि तपाईं मार्केटिंग खेलमा हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई पहिले नै थाहा छ कि सही समयमा सही दर्शकहरूमा पुग्नको लागि स्वचालन प्रमुख हो। तर के तपाइँ जान्नुहुन्छ कुन स्वचालित ईमेलले तपाइँको मार्केटिंग बक्सको लागि सब भन्दा ठूलो धमाका दिन्छ?
कहिले र किन स्वचालित ईमेलहरू पठाउने
स्वागत ईमेलहरू मानक ईमेल न्यूजलेटरहरू भन्दा% 86% बढी प्रभावकारी छन्।
पोषण ईमेल n 47% नौं-पोषित सीसाको तुलनामा ठूलो खरीदहरू उत्पादन गर्नुहोस्।
धन्यवाद ईमेलहरू प्रचार मेलिंग भन्दा १ than गुणा बढी राजस्व उत्पन्न गर्नुहोस्।
जन्मदिन ईमेलहरू समान प्रस्तावको साथ अन्य मेलिंगमा रूपान्तरण दर %०% ले लिफ्ट गर्नुहोस्।
पुनः संलग्नता ईमेलहरू अधिक सment्लग्नता ड्राइभ गर्नुहोस्,% 45% प्राप्तकर्ताहरूले यसका सन्देशहरू पढ्नुहोस्।
जबकि धेरै व्यक्ति विश्वास गर्दछ धेरै ईमेल संचारले नकारात्मक असर तपाईंको मार्केटिंग को प्रयास गर्न सक्छ, स्वचालित सन्देशहरू यस्तै थोक मा सेट छैन। यसले तपाईंको छुटकारा सम्बन्धी मुद्दाहरूमा भाग लिने सम्भावनाहरूलाई कम गर्न सक्छ। र तिनीहरू निजीकृत र समयबद्ध भएकोले उनीहरूले सment्लग्नताको महत्त्व बढाउन सक्दछन्। यसको मतलब अधिक खुल्छ, उत्तम क्लिक-थ्रु रेट र रूपान्तरणहरू।
टैग: स्वचालित ईमेलहरूस्वचालनजन्मदिन ईमेलहरूरूपान्तरण दरईमेल स्वचालनईमेल रूपान्तरण दरईमेल खुला दरमेरी आमापोषण ईमेलखुला दरखुला दरहरूपुनः संलग्नता ईमेलहरूधन्यवाद ईमेलहरूस्वागत ईमेलहरू
सुझावहरूको लागि धन्यवाद! अर्को पटक मैले GetResponse प्रयोग गर्दा म यसलाई दिमागमा राख्नेछु।